Topnepalnews.com | आन्तरिक हवाई भाडा ६ वर्षयताकै सस्तो, कसरी तोकियो भाडादर ?
आन्तरिक हवाई भाडा ६ वर्षयताकै सस्तो, कसरी तोकियो भाडादर ?
Posted on: December 07, 2016 | views: 750
काठमाडौं,मंसिर २२ । आन्तरिक उडानतर्फको हवाई भाडा पछिल्लो ६ वर्षयताकै सस्तो भएको छ । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएपछि वायुसेवा कम्पनीहरूले गन्तव्यअनुसार ९० देखि ३ सय १० रुपैयाँसम्म भाडा घटाएका छन् । पछिल्लो दुई महिनायता वायुसेवा सञ्चालक संघ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संयुक्त कार्यदलले मंगलबार दोस्रोपटक भाडा समायोजन गरेको हो । यो समायोजनसँगै हवाई भाडा पछिल्लो ६ वर्षयताकै कम भएको वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आयोन)का प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले जानकारी दिए ।
इन्धनको मूल्य घटेपछि वायुसेवाहरूले यात्रुसँग लिने फ्युल सरचार्ज घटाउने गरेका छन् । नेपाल आयल निगमले सोमबार कायम गरेको नयाँ मूल्यअनुसार हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँमा झरेको छ । यसअघि ३ पुस ०६७ मा हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ रहेको थियो ।
सोही वर्ष २८ फागुनमा ९० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको हवाई इन्धनको मूल्य त्यसपछि भने निरन्तर वृद्धि भइरहेको थियो । हवाई इन्धनको मूल्यमा न्यूनतम ४ रुपैयाँसम्म थपघट भए सोही आधारमा सरचार्ज समायोजन गर्ने प्रचलन रहेको सिम्रिक एअरका बजार प्रबन्धक प्रज्ज्वल थापाले बताए ।
‘त्यस आधारमा यो भाडा ६ वर्षयताकै सस्तो हो,’ उनले भने । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल आयोनको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले बुधबारदेखि लागू हुने गरी फ्युल सरचार्ज घटाउने निर्णय गरेको हो ।
निगमले सोमबार आन्तरिक उडानका विमानले भर्ने इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाजले भर्ने इन्धनको मूल्यमा प्रतिकिलोलिटर ८१ डलर कटौती गरेको थियो ।
पछिल्लो मूल्यअनुसार आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर सात सय ५० डलर कायम भएको आयल निगमले जानकारी दिएको छ ।
कसरी तोकिन्छ भाडा ?
हवाई भाडा दुईवटा भाडा निर्धारित भाडा र फ्युल सरचार्जको योगबाट तयार हुन्छ । सरकारले ०६७ मा वायुसेवा कम्पनीले लिन पाउने अधिकतम भाडा निर्धारण गरेको छ ।
हरेकपटक इन्धनको मूल्यमा थपघट हुँदा सरकारले तोकेको अधिकतम भाडा यतावत् रहन्छ भने फ्युल सरचार्ज मात्र थपघट हुन्छ ।
हवाई इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढाव
३ पुस ०६७ – ८० रुपैयाँ÷लिटर
२८ फागुन ०६७ – ९० रुपैयाँ÷लिटर
४ पुस ०७१ – १ सय ३३ रुपैयाँ÷लिटर
१७ साउन ०७२ – १ सय १८ रुपैयाँ÷लिटर
२३ कात्तिक ०७२ – २ सय ३३ रुपैयाँ÷लिटर
२० माघ ०७२ – १ सय ६४ रुपैयाँ÷लिटर
४ फागुन ०७२ – १ सय ९ रुपैयाँ÷लिटर
१७ असार ०७३ – ९९ रुपैयाँ÷लिटर
१ असोज ०७३ – ९४ रुपैयाँ÷लिटर
२० मंसिर ०७३ – ८६ रुपैयाँ-र लिटर
-(नयाँ पत्रिका दैनिक)